NL (ခ) ဒီအမောင်: 05/09/12
Facebook အကူအညီဖြင့် သားအမိသုံးဦး ပြန်လည်ဆုံတွေ့........!
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေသည့် သူမ၏ ကလေးများအား Facebook၏ အကူအညီဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ကယ်လီဖိုးနီယားတောင်ပိုင်း၊ ဆန်တာဘာဘရာတွင် နေထိုင်သည့် အမည်ဖော်ပြခြင်း မရှိသော အဆိုပါ အမျိုးသမီး၏ ခင်ပွန်းဟောင်းသည် (၁၉၉၅)ခုနှစ်က သူမ၏ သားနှင့်သမီးအား ခေါ်ဆောင်ကာ ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် ကလေးများနှင့် မိခင်မှာ လုံးဝအဆက်အသွယ် ပြတ်သွားခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ကလေးနှစ်ဦးမှာ အသက်(၂)နှစ်နှင့် (၃)နှစ်သာ ရှိကြသေးသည်။ သူမသည် မတ်လအတွင်းက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ရောက်နေပြီဖြစ်သည့် သမီးနှင့် အဆက်အသွယ် ရခဲ့သော်လည်း မိန်းကလေးက မိခင်အပေါ် အေးစက်စက် ရှိနေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by nllamin.com at 7:53 PM
အ​မျိုး​သား​​ ​၅၀၀၀​ ​ကျော်​နှင့်​​ ​အ​တူ​ အိပ်​ခဲ့​ဖူး​သည့်​ ​ဗြိ​တိန်​ အ​မျိုး​သ​မီးတစ်ဦးအကြောင်း.........!
နစ်ကီလီက သူမ​ အသက် ၁၆ နှစ်​ အရွယ် အပျိုစင်​ ဘဝ ဆုံးရှုံး​ ပြီးကတည်းက အမျိုးသား အမြောက်​ အမြားနှင့် လိင်​ ဆက်ဆံ​ ခဲ့ကြောင်း ပြောကြား​ ခဲ့သည်။ နစ်ကီက နိုက်ကလပ်များ၊ လမ်းကြားများ၊ ပန်းခြံများ၊ ရုပ်ရှင်​ ရုံများနှင့် ဆယ်ကျော်သက် ကပွဲများ​ ပါမကျန် အမျိုးသားများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး လိင်​ ဆက်ဆံ​ ခဲ့သည်ဟု​ ဆိုသည်။
Posted by nllamin.com at 7:52 PM
၅။စိတ်ကပျို ကိုယ်ကမနု အပျိုဆို “အခု” “အခု” ဖြစ်နေတဲ့ယောင်္ကျား
၆။ဆရာကြီး အရမ်းလုပ် ဘာမှမဟုတ်ဘဲ ဟန်လုပ်တဲ့ယောင်္ကျား
၁၀။တရားဗန်းပြ သြကာသတောင် မရတဲ့ယောင်္ကျား
Posted by nllamin.com at 7:39 PM
ဆေးဆိုးပန်းရိုက် .. လိုက်ကြတာ.
အခုတော့.. မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ ..ဝေးပြီပေါ့....
Posted by nllamin.com at 7:36 PM
Posted by nllamin.com at 6:12 AM
Posted by nllamin.com at 6:07 AM
ကျနော်နဲ့ Folder Options (ပျောက်ဆုံးခြင်း)
ကျနော့်ကွန်ပြူတာမှာ Folder Options ပျောက်သွားလို့ ခဏလောက်တော့ ခေါင်းစားသွားရပါတယ်။ စဉ်းစားခန်းဖွင့်လိုက်သေးတယ်။ ဘယ်နဲ့ပျောက်သွားရတာပါလိမ့်။ Folder Option ဆိုတာကို မိမိရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဒါမှမဟုတ် အများကိုမမြင်မတွေ့စေချင်တဲ့ file (or) folder များကို မြင်ကွင်းမှ ဖျောက်ထားခြင်း၊ မြင်ကွင်းပေါ်သို့ ပြန်ရောက်အောင် ပြန်ခေါ် ခြင်းတို့မှာ များသောအားဖြင့် အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။
ကျနော်လည်း file တစ်ချို့ကို ဖျောက်ထားမလို့ လုပ်မယ်အကြံမှာ Tools ထဲမှာ Folder Options ရှိမနေဘူး။ ဒါများ ခက်တာမှတ်လို့ Control panel ထဲကိုသွားမှာပေါ့။ ရော အဲဒါမှ ခက်ပြီး . . . Control panel ထဲမှာ လည်း မရှိဘူးဗျ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ? အဲဒီတော့ ကျနော့်ဆရာတွေအထဲက ကျနော်နဲ့အနီးဆုံးရှိနေတဲ့ ဆရာကိုမေးရတော့မှာပေါ့။ အဲလိုနဲ့ ကျနော့်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ google.com ဆီဝင်မေးလိုက်ရပါတယ်။
Posted by nllamin.com at 3:45 AM
မသိသေးသောဝူးများအတွက် အသုံးဝင်မည် လင့် များ..
from ( http://www.zwekapinmyae.com/profiles/blogs/2879352:BlogPost:546893 )
http://mmastrology.myanmarbloggers.org/ မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် နှင့် နက္ခတ်
http:// http://chitoophoto.blogspot.com/ blog နှင့် I T နည်းပညာ
http:// https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=6af78d8a85&view=att&a............ ကွန်ပြူတာအတွက် နောက်ခံ ကိုယ့်ပုံနဲ့ မြင်ကွင်း...
Posted by nllamin.com at 3:44 AM
Facebook အကူအညီဖြင့် သားအမိသုံးဦး ပြန်လည်ဆုံတွေ့....
အ​မျိုး​သား​​ ​၅၀၀၀​ ​ကျော်​နှင့်​​ ​အ​တူ​ အိပ်​ခဲ...